NepalManch :: बाग्मती स्वच्छ बनाउन उपत्यकाका थप सात स्थानमा पानी प्रशोधन केन्द्र बन्दै, कहाँ पुग्यो ब्युटिफिकेशनको काम ?
काठमाडौं : अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले दुई दशकअघिदेखि बाग्मती संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । तर, जनसंख्या वृद्धि हुँदै गर्दा बाग्मतीलार्ई सफा राख्न हम्मेहम्मे परिसकेको छ । जति धेरै जनसंख्या उति नै धेरै फोहोर निस्किने हुँदा समितिले बाग्मती स्वच्छ बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा थप चार ठाउँमा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यअघि बढेको छ ।
‘यससँगै गुह्यश्वरीमा दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लागतमा नयाँ पानी शुद्धीकरण केन्द्र निर्माणको काम सकिएको छ । यस आयोजना १० वर्षसम्म नै सञ्चालन गर्नेछौ,’ उनले जानकारी दिए ।
कहाँ पुग्यो बाग्मती ब्युटीफिकेशनको काम ?
बाग्मती ‘ब्युटिफिकेशन’ को काम २७ वर्षसम्म पनि कुनै सुधार आएकाे छैन । लामो समयदेखि रोकिएको काम अहिले पुन: सुरू भएको बाग्मती एकीकृत सभ्यता समाजले बताएको छ । आयोजनामा हालसम्म १४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको समाजले बताएको छ । हाल आयोजना अघि बढाउनका लागि भने जग्गा मुआब्जाको क्षतिपूर्तिको कारणले समस्या भइरहेको समाजले जनाएको छ ।